ဇရပ်တောင်ပံကျိုး နှင့်ကြောင်ခံတွင်းပြတ် – Grab Love Story
ကျွန်တော့အမည်ကို မိတ်မဆက်တော့ပါဘူးဗျာ။ မိတ်ဆက်လို့လည်း ကျွန်တော့မိတ်က ပိုမရှည်တော့ပါဘူးဗျာ ။ ဟုတ်တေဟုတ် ခိ.. ခိ… အခုဇတ်လမ်းက.. ဒီလိုဗျ…….. ကျွန်တော်က ပထမနှစ်ကျောင်းသားပါ (…)မေဂျာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်နှင့်အခန်းတူတဲ့ သဉ္ဇာကို ကျွန်တော်က အရမ်းကြွေမိပါတေဗျာ။ သူကလည်း အရမ်းကို ပွင့်လင့်သူလေဗျာ။ ကျောင်းကို သူလာရင် ကြွေတဲ့ဘဲတွေကလည်းပရမ်းများတာကိုဗျ။ သူကကျွန်တော့လို ကောင်ကို သိပ်ဂရုမစိုက်ပေမဲ့လည်း ကျွန်တော်က သူ့ကိုဂရုစိုက်ပြီး သူလိုအင်သမျှကို တတ်နိုင်သမျကြိုးစားပေး၊ အနေနီးတော့ ချစ်သူဖြစ်သွားကြပါတေဗျ။ ဒါပေမဲ့လည်း ငွေကြေးမရှိ ဆင်းရဲတော့လည်း တစ်ခါတစ်ခါ စကားများကြ ရန်ဖြစ်ခဲ့ပါတေဗျ။
သူကကျွန်တော့ကို…. အောင်ဇော်..နင်နှင့်ငါပြတ်ပြီ .. ပြောပြီး ပြတ်စဲသွားကြပါတေဗျ………….. ကျွန်တော့အမေနှင့် ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းတွေက အားကုန်ပြီး အမျိုးမျိုးဘဲ နှိစ်သိမ့်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က သူ့ကိုချစ်မိနေတော့လည်း သူ့ကိုပြန်လိုက်ပြီး တောင်းပန်တော့ ပြန်အဆင်ပြေသွားကြပါတေ၊ အခုလာမဲ့ တနင်္ဂနွေရက်မှာ သူနှင့်အတူ ရုပ်ရှင်သွားဖို့ ပိုက်ဆံလိုလာတော့ ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းဖိုးပြည့် ဆီနေ ပိုက်ဆံချေးဖို့ သူ့ဆီကိုဘဲ သွားလိုက်ပါတော့တေဗျ၊ …. ဖိုးပြည့်က ကျွန်တော်နှင့်ငယ်ငယ်ကတည်း အတူတူကျောင်းတက်ပြီးတော့ ကြီးလာကြတာပါ။ သူဆီက အခုငွေချေးရမှာက အကြွေးသစ်ပေါ့ဗျာ၊ ပထမတစ်ကြိမ်ရှိသေးတေဗျ အကြွေးပေးရမှာ ကျွန်တော်က သဉ္ဇာနှင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်လို့ ငွေတစ်သောင်း ချေးထားတာ ၅၀၀၀ဘဲပေးထားတာ၊ အခုတစ်ခါချေးရင်တော့ နှစ်သောင်းခွဲကျော်ပြီပေါ့ဗျာ၊ဒါပေမဲ့လည်းဘဲ ကျွန်တော်က တက္ကသိုလ်တက်ရင်း အလုပ်လုပ်နေသူမို့ လကုန်ရင်တော့ ပြန်ဆပ်နိုင်မှာပါလို့တွေးပြီး သူဆီကို သွားလိုက်ပါတော့တေဗျာ…… သူတို့က သုဝဏ္ဏမြို့နယ်ရဲ့လုံချင်းတိုက်အိမ်ခြံအကျယ်ကြီးနှင့် နေကြတဲ့ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုပါ။ ကျွန်တော်တို့က ၆ လွှာတိုက်ခန်းရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ် ၆လွှာမှာ နေရတဲ့ပါဗျ၊..
ဆက်အုံးမေဗျာ… သူတို့အိမ်ကို ရောက်သွားတော့ တံခါးဘေးက ခေါင်းလောင်းမြည်တဲ့ ခလုပ်လေးကို နှိပ်မေလို့ ကြံနေတုန်ဘဲ ဖိုးပြည့်က တံခါးဖွင့်ပြီး ထွက်လာကာ ဟာ.. ဟျောင်.. အောင်ဇော် ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဟ သူကမေးလာတော့ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ကို…. ….. ဟျောင့် ငါစော်ကို ရုပ်ရှင်သွားပြမလို့ကွာ အဲ့ဒါ ခုငါ့မှာ ပိုက်ဆံလိုနေတေ မင်းဆီက လာပြီချေးတာကွ ပြောလိုက်တော့ ဖိုးပြည့်က ခဏ္ဏစောင့်ပြေပြီး သူ့ရဲငွေကို အခန်းကယူလာပြီး ဟျောင့် မင်းစော်က မဟန်ဘူးနော် မင်းသတိထားပါ ပြောပြီးပိုက်ဆံပေးကာ သူက ကျွန်တော့ကိုကြည့်ပြီး အပြင်မသွားခင်မှာ ဟျောင့် ငါ့အမေကို ဝင်နုတ်ဆက်သွားအုံး အမေက မင်းကို မေးနေတေဟ ပြောတော့ အန်တီဒေဝီကို နုတ်ဆက်ရအောင်ဘဲ အိမ်ထဲကို ဝင်လိုက်ပါတော့တေ… အန်တီဒေဝီဟာ အိနြေ္ဒရှင်မိန့်မပါဘဲ ကျွန်တော်ကိုဆိုရင် သားအရင်းလိုဘဲ ဆက်ဆံတဲ့အန်တီတစ်ယောက်ပါ ၊ သူမက ကံဆိုးရှာပါတေဗျ လင်ယောကျာ်း ဦးထွန်းမောင်က ဖိုးပြည့် ၁၀တန်းမှာ သူ့ကိုကွာရှင်းပြီး သူရဲ့စက္ကထရီကောင်မလေးနှင့် ယူပြီး သူ့ကိုကွာရှင်းကာ သြဇီးကို ထွက်သွားခဲ့ပါတေ။
အဲ့ဦးလေးက ဘာလို့အန်တီလို အရမ်းလှပြီး ကျက်သရေရှိတာကို ပစ်ပြီး သူရဲ့စက္ကထရီမလေးကိုယူပြိး ထွက်သွားမှန်းကို ကျွန်တော်မတွေးတတ်အောင်ပါဘဲဗျာ…….. အန်တီဒေဝီက အချို့သောမင်းသမီးတွေထက်ကို အရမ်းလှတေဗျ။ သူရဲ့ဘော်ဒီက ပြောရမေဆိုရင် နိုင်ငံခြားမင်းသမီးတွေလိုပါဘဲ။ မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ ရွှေဘိုမင်းကြိုက် ဘော်ဒီကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ ၊ ကျွန်တော်က အန်တီကိုနုတ်ဆက်ပြီး ဖိုးပြည့်ဆီကငွေကို ယူပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တော့တေ။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အမေကလည်း ကျွန်တော့ရဲ့စော် သဉ္ဇာကို မကြိုက်ကြောင်းပြောတာပေါ့ဗျာ။ သူက ငွေကိုလူထက် ပိုပြီးခင်တတ်တာကို ပြောကြတော့တေ ၊ ဒါပေမဲ့ ၁၉ နှစ်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်မှာတော့ မစိတ်မွန်းနေတော့လည်း အမေတို့ပြောတာကို နားမဝင်ခဲ့ဘူးလေ၊ သူ့အချစ်ကို ရရှိရေးသာ အရေးကြီးနေတာ၊ သူနှင့်ကြိုက်ပြီး ပြတ်သွားလို့ ပြန်လိုက်ပြီး ရှင်းပြမှ အဆင်ပြေခါစမို့လေ ဟား.. ဟား… ဖိုးပြည့်ဆီက ချေးယူလာတဲ့ငွေ နှစ်သောင်းက သူနှင့်သူ့သူငယ်ချင်းအတွက်ပါ ရုပ်ရှင် လက်မှတ်ဝယ် စားစရာဝယ်ပြီး ၊ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး စားချင်ကိုလိုက်ကျွေးတာနှင့် ကုန်ရော သူတို့နှင့် အဲ့နေပျော်ခဲ့ရပေမဲ့ နောက်နေ့တော့ နောက်တစ်ကောင်ပါသွားရော……… ကျွန်တော်က အလုပ်ကပြန်လာတော့ တန်းတွေ့တာဘဲ ဟိုဘဲက ကားအကောင်းစားစီးပြီး သူနှင့်သွားတာကို မြင်လိုက်တော့……….. တောက်… ခွေးမ ငါ့ကိုချစ်တေပြောပြီးတော့ နောက်တစ်ယောက်နှင့်တွဲနေတေ.. စိတ်ကနေပြောပေမဲ့ စကားက နုတ်ကထွက်မလာဘူး ။